Ellicott wuxuu Soo Bandhigayaa Ciidda ugu Weyn Caalamka ee Dunida - Ellicott Dredges
Shirkada Mashiinka Ellicott Ayaa Soo Bandhigtay Qodista Macdanta Ugu Weyn Dunida
Waxaa laga yaabaa 3, 2005
Mawduucyada aasaasiga ah ee "COOLJARLOO I"
Qoto dheer qodista max 25 m, min 4.6 m
Bamka diirinta Ellicott® 24 gudaha.
Saar xoog faras 2,000 HP (1491 KW)
Miisaan qallalan qiyaastii 2,700 ton
Bixinta korantada xeebta 22,000V / 3-ph / 6047
Dhexroor dhuuxa dhuuqa 23.52 gudaha.
Dhexroor tuubbo dillaac 23.62 gudaha.
Isugeynta awoodda la rakibay 4,100 hp (3057 KW)
Ellicott Mashiinka Iskaashiga Baltimore, Maryland wuxuu dhammeystirey mashruuc loo yaqaan 'turnkey project' si loo qorsheeyo loona dhiso waxa la rumeysan yahay inuu yahay kii ugu weynaa abid ee adduunka laga qodo carrada.
La qaboojiyey "COOLJARLOO I ”, Dherger-ka dherger waxaa loo dhisay macdan qodista macdanta culus Galbeedka Australia. Oo leh dherer guud oo ah 195 ft iyo ballac ah 52 ft, ​​oo ku shaqeynaya cabirka dhererkiisu yahay '160-inji dhexroor laba jibbaarayaal laba jibbaaran, dredger waa kan ugu weyn nooc kasta oo Australia ah.
Qandaraaska qodista alaabada ayaa la siiyay "Iskaashiga Mashiinka Ellicott ” waxaa iska kaashaday shirkadda Cooljarloo oo ka kooban iskaashi Kiimikooyinka Kiimikada ee Minproc Pty. iyo KMCC Galbeedka Australia Pty., Ltd., oo ah shirkad hoos timaad Kerr-McGee.
Ellicott nooca dredger waxaa loogu talagalay iskaashiga wadajirka ah ee A $ 400m Cooljarloo, kaas oo ah mashruucii ugu horreeyay ee isku dhafan ee adduunka loogu rogo macdanta Titanium ceyriinka midabka rinjiga.
Kaydinta ciidda culus ee macdanta, taas oo ku taal xNUMX kilomitir waqooyiga magaalada Perth, waxay ka kooban tahay dhammaan maaddooyinka lagama maarmaanka u ah, waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka mid yihiin ilmenite, zircon, iyo rutile. Waxa kale oo jira tiro macquul ah oo leucozene iyo monazite waxaana mashruuca oo dhan la rajaynayaa in uu soo saaro dhoofinta sanadlaha ah oo qiimahoodu yahay $ 140m.
Wadajirka wadajirka ah ayaa qandaraaska lagu siiyay iskaashiga mashiinka Ellicott ka dib socdaal adduunka oo dhan ah oo soo saareyaasha iyo warshadda jirta, iyadoo lagu saleynayo qiimaha iyo waqtiga la keenayo ee 11 bilood ah Xaqiiqdii, qod-qodihii waxaa lagu dhammeeyay wax kayar 11 bilood laga bilaabo bilowgii mashruuca taas oo, sida laga soo xigtay wada-hawlgalayaasha iskaashiga wadaagga ah ee Minproc, ay ahayd "waqti lagu diiwaan geliyo mashruuc baaxaddaas iyo kakanaanta leh leh."
Gaarsiinta hore waxaa suurtagal looga dhigay, sida laga soo xigtay Shirkadda Mashiinka Ellicott, sababtoo ah falsafadeeda "mas'uuliyadda keliya" maaraynta mashruuca.
Naqshadeynta iyo dhismaha “COOLJARLOO I”Mashiinno ayaa lagu dhammaystiray Mareykanka iyo birta dhismaha ee Singapore. Dhammaan qaybaha waxaa loo diray Australiya si loogu shiro goobta.
The "COOLJARLOO I ” wuxuu leeyahay qodaha ugu horeya ee qadka-dhaqaajiya ee laba-giraan-labaatrool giraangiraha. Dherger-ka oo dhan waa koronto DC marka laga reebo murgacadaha oo ay maamushaa haydado haydiyaal leh.
Xaraashkeeda laba jibbaarane ee '900 HP' oo leh dusha sare waxay leedahay dhexroor 160-inji ah oo miisaankeedu yahay ku dhawaad ​​100 metrik ton. Qalab-gacmeedyadan dareeraha leh ee wareegga leh ayaa leh bir-kor u qaadidda garabka taageersan, birta been-abuurka ah ee heleysa tuubbada tuubbooyinka, iyo taageeroo qaab dhismeedka loogu talagalay ku dhejinta moduleka jaranjarada.
Labada lugood waxay ka kooban yihiin laba qaybood oo bir culus oo ka kooban sideed baaldiyood oo aan hooseynin kuwaas oo sameeya unug isku-dhafan oo ku guuleysta quudin wanaagsan. Kulankan ayaa loo been abuuray qaybo si loo fududeeyo beddelaadda iyada oo aan la baabi'in qaybaha kale ee moodeelka.
Labada lugood waxaa wada xawaare xawaare, torque sare, bastoolad radial ah, matoorrada dareerayaasha ilaa Ellicott® sanduuqa qalabka loo yaqaan 'gear gear' kaas oo lagu rakibay xirmo ka-hortag xabbadeed. Wadadan waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo adeeg sare si loo bixiyo xumaanta lagama maarmaanka u ah inay ka hortagto adkaanta qulqulka biyaha hoostooda.
Xirfadlaha soo iibsiga, oo lagu dhejiyay gudaha kala badhida qulqulka taayirrada, ayaa ah bir bir alxanka leh oo lagu beddeli karo taargooyin bir ah oo lagu dhejin karo ama ku dhegan meelaha laga yaabo in la baabi'iyo.
Labada taayir waxay ku shaqeeyaan si hufan isla shaqeynta labada xiddigle iyo dekedaba, waxay si weyn u kordhineysaa waqtiga qodista wax ku oolka ah iyo hufnaanta firfircoonaanta. Alaabada la qodayo waxaa lagu dhex ridayaa baaldiyo baakadaha meesha la geynayo ilaa la qaadanayo, sidaas awgeed tuubbada nuugista, ugu badnaan boqolkiiba boqolleyda adkaha ah bamka tuubada.